हट बेनिशा हमाल, हिट कहिले बन्ने ? | Daily State News
हट बेनिशा हमाल, हिट कहिले बन्ने ?
१८ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ०९:४१ मा प्रकाशित - डेली स्टेट न्युज
जे होस, बेनिशा अहिले मस्ती मुडमा छिन् । अष्ट्रेलियापछि थाइल्याण्ड पुगेर नेपाल फर्किएकी यी सुन्दरीका तस्बिरहरु बोल्ड देखिन थालेका छन् । उनले थाइल्याण्डमा खिचाएको एक स्विमसुट तस्वीरले त चलचित्र ‘रेस २’ की दीपिका पादुकोणको शैलीको झझल्को दिन्छ ।